umshini wokudonswa kwezinhlanzi udizili wokudla umshini wokuphehla ugesi udizili wokudoba owedlule
Ngokwenza pellets izinhlanzi, iningi labantu lizokhetha okusantayo izinhlanzi feed pellet mill. Njengoba izinhlanzi ezidonsa emanzini zintanta emanzini azisebenzi ukuba zidliwe ngezinhlanzi. Okwamanje, kungakhawulela ukungcoliswa komoya kokuphakelwa kwezinhlanzi. Ama-pellets wezinhlanzi ezintantayo akhukhumala ekwakheni isikhutha ngaphansi kwezinga lokushisa ngokweqile, ngakho-ke kuyelashwa futhi kuyasiza ukuthi kugaywe izinhlanzi. Noma sibiza lolu hlobo lwe-pellet mill njengezinhlanzi ezidla ama-pellet extruder, nokho, the pellets ezenziwe ngendlela uma kungenziwa ngaphezu kwalokho isetshenziselwa ukondla pet kanye namapulangwe ezahlukene. Ububanzi bama-pellets asele angaba ngu-0.9-10mm njengoba ufuna. Kungaba uhlobo olintantayo noma uhlobo olucwilayo. Uma isilinganiso sesitashi ezintweni ezingaphekiwe singaphansi kakhulu 35%, lapho-ke izimbotshana zizocwila emanzini.
Injini yedizili izinhlanzi zokudla eziphuma ngaphandle iqhutshwa yinjini yedizili futhi isebenza kulesi sisekelo.Ifektri yethu inikezela ngamapuleti ahlukahlukene okufa nge-aperture engu-0.9-15mm, ezingakhipha ngaphezu kwe 30 izinhlobo zama-pellets ezijwayelekile zokudla. Umthamo uvela 30 kg / h kuya kwamathani amabili ngehora. Ngaphezu kwalokho, sinikeza futhi isilinganiso esihle sokunciphiswa kwepuleti yokufa, ukuze izinhlayiya ngazinye ozenzile zibushelelezi, umfaniswano nokucwebezelayo. Idizayini yokwakhiwa kwalo mshini wokuphakela izinhlanzi udizili isayensi futhi inengqondo, nendawo encane yaphansi nomsindo ophansi, ukuphuma okukhulu nokusebenzisa amandla okuphansi. Izinga lokubumba lezinhlayiya liphezulu futhi nengaphezulu likhanya futhi lihlanzekile, okulungele ukugcinwa nokuhamba. Ukusebenza nokugcinwa kwale mishini kulula, iphephile futhi inokwethenjelwa.kwaye kukhethwa kakhulu amapulazi amancane noma aphakathi nendawo nezinhlanzi zokukhiqiza izinhlanzi. Isetshenziselwa ukucubungula izinto ezahlukahlukene zokusanhlamvu kokuphakelayo kwamanzi asezingeni eliphakeme ngezinhlanzi, izinja, ufudu, amasele, ama-shrimp kanye nemifantu, njll. Umshini wokudoba wezinhlanzi unezikhunta ezahlukile zokufa, futhi ngakho-ke usayizi we-pellet uyakwazi ukuguqulwa ngokuya ngezidingo zakho zokukhiqiza. Siphinde futhi sinikeze ngomshini wokudoba izinhlanzi odizili olingana kahle nenqubo yokulima yezinhlanzi kanye nezinhlanzi.
Umsebenzi wokusebenza komshini wokuphakela izinhlanzi udizili
1. Isilingo: Ngemuva kokungena kwi-extruder, okuqukethwe kufanele kuqala ukuthukuthela. Kuyafana nenqubo yokulinga umshini wokudla izinhlanzi wedizili, okukhanyisiwe futhi kufudunyezwe kulokho okubalulekile. Inhloso yokuqothula nokuvunguza ukukhulisa ukushisa kanye nomswakama wezinto ukuze kusebenze ukuvuthwa okusheshayo kwezinto lapho kususwa okulandelayo.
2. Ekhipha: Ngemuva kokuzama, impahla ingena kwisikulufa sokuhambisa extrusion cavity, ukwakheka kwegumbi elingaphezulu kancane kancane kunqenqemela izinto. Ingcindezi yezinto ezibonakalayo iyanda ngesikhathi sokunyakaza, Ngenkathi impahla esekhwebheni extrusion patr extrusion ephelezelwa shear eqinile, ukuguqa nokuxabana, izinga lokushisa lezinto landa kakhulu.
3. Ukuvuvukala: Lapho impahla ifinyelela ukuphuma kwe-screw conveyor extrusion patity, ingcindezi inkulu kunayo yonke. Ngemuva kokuncibilikisa igumbi lokukhipha, ingcindezi inyamalala ngokuzumayo, ngasikhathi sinye, ukushisa nomswakama kulahlekelwa ngokushesha, okwenza umthamo wezinto ezibonakalayo ukhuphuke ngokushesha futhi unwebe.
4. Ukuzisika: Izinto ezikhiqizwayo zisikwa ngosayizi oludingekayo lapho ziqongelelwa kubude obuthile.
izinzuzo zomshini wokuphakela izinhlanzi udizili
1.Kuxazululeka inkinga yokushoda kukagesi futhi ugesi awuzinzanga, futhi amandla esigaba ezintathu awasetshenziswa, kepha ukuphuma kuyadingeka.
2.Izinhlobonhlobo zamapuleti wokufa ane-ap3ure ka-0.3-15mm, ezingakhipha ngaphezu kwe 30 izinhlobo zama-pellets ezijwayelekile zokudla.
3. Thuthukisa uhlelo lokulawula imvamisa, nalesi simiso, kungakhiqiza ama-pellets asayizi ahlukahlukene ngokushintsha ijubane.
4. Bangu 4 izinhlobo zokubumba ezihlangabezana nazo zonke izidingo zamasayizi. Akhipha kalula futhi aguqulwe.
5.Isilawuli sixhumene ne-boiler, izinto zokwakha zinga-pre-steamed ngokuphelele, ngakho-ke ikhwalithi nokusebenza kahle kwama-pellets ngokusobala kuthuthukiswa.
6. Imisebenzi ezinzile, ingasebenza ngokuqhubekayo.